शब्द काउन्टर - क्यारेक्टर काउन्टर
शब्द काउन्टर - क्यारेक्टर काउन्टरको साथ, तपाईंले लाइभ प्रविष्ट गर्नुभएको पाठका शब्दहरू र क्यारेक्टरहरूको संख्या सिक्न सक्नुहुन्छ।
शब्द काउन्टर भनेको के हो?
शब्द काउन्टर - क्यारेक्टर काउन्टर एक अनलाइन शब्द गणना क्यालकुलेटर हो जसले तपाईंलाई लेखमा शब्दहरूको संख्या गणना गर्न अनुमति दिन्छ। शब्द काउन्टर उपकरणको साथ, तपाईंले लेखमा शब्दहरू र क्यारेक्टरहरूको कुल संख्या, अनुवादहरूमा सामान्यतया आवश्यक स्पेससहित वर्णहरूको संख्या, साथै वाक्य र अनुच्छेदहरूको संख्या पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। सफ्टमेडल वर्ड र क्यारेक्टर काउन्टर सेवाले तपाईले टाइप गरेको कुरा कहिल्यै बचत गर्दैन र तपाईले लेखेको कुरा कसैसँग साझा गर्दैन। तपाईंले सफ्टमेडल अनुयायीहरूको लागि नि: शुल्क प्रस्ताव गर्नुभएको शब्द काउन्टरमा कुनै शब्द वा क्यारेक्टर प्रतिबन्धहरू छैनन्, यो पूर्ण रूपमा नि: शुल्क र असीमित छ।
काउन्टर शब्दले के गर्छ?
शब्द काउन्टर - क्यारेक्टर काउन्टर पाठमा शब्द र क्यारेक्टरहरूको संख्या जान्न आवश्यक छ तर Microsoft Word वा LibreOffice जस्ता प्रोग्रामहरू प्रयोग नगर्ने मानिसहरूका लागि धेरै उपयोगी उपकरण हो। शब्द काउन्टर कार्यक्रमको लागि धन्यबाद, तपाइँ शब्दहरू र क्यारेक्टरहरू एक-एक गरेर गणना गर्न आवश्यक बिना गणना गर्न सक्नुहुन्छ।
यद्यपि शब्द गणना गणना गर्नका लागि शब्द काउन्टरहरूले सबैलाई अपील गर्दछ, जसलाई शब्द काउन्टरहरू जस्ता कार्यक्रमहरू चाहिन्छ तिनीहरू प्राय: सामग्री उत्पादकहरू हुन्। एसईओ काम गर्ने धेरै मानिसहरूलाई थाहा छ, शब्द गणना सामग्री उत्पादनमा एक धेरै महत्त्वपूर्ण प्यारामिटर हो। प्रत्येक सामग्रीमा खोज इन्जिनहरूमा क्रमबद्ध गर्न निश्चित संख्यामा शब्दहरू समावेश हुनुपर्छ, अन्यथा खोज इन्जिनले यी सामग्रीहरू, जसमा शब्दहरूको अपर्याप्त संख्या समावेश छ, कमजोर सामग्रीको कारण शीर्ष श्रेणीहरूमा लैजान सक्दैन।
यो काउन्टर; यो एक व्यावहारिक सहायक उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिन्छ जुन पाठ वा थीसिस लेखकहरू, विद्यार्थीहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, प्रोफेसरहरू, व्याख्याताहरू, पत्रकारहरू वा सम्पादकहरू जो पेशेवर SEO लेख विश्लेषण गर्न चाहन्छन् लेखहरू लेख्ने वा सम्पादन गर्दा लाभ उठाउन सक्छन्।
सबै भन्दा राम्रो र सबैभन्दा अनुकूलित लेख लेख्नु प्रत्येक लेखकको आदर्श हो। लामो वाक्यको सट्टा छोटो र बुझ्ने वाक्यहरू प्रयोग गर्दा लेख थप उपयोगी बनाउँछ। यस उपकरणको साथ, शब्द / वाक्य अनुपात हेरेर पाठमा लामो वा छोटो वाक्यहरू छन् कि भनेर निर्धारण गरिन्छ। त्यसपछि, पाठमा आवश्यक समायोजन गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, यदि शब्दहरू वाक्यहरू भन्दा धेरै ठूला छन् भने, यसको मतलब लेखमा धेरै वाक्यहरू छन्। तपाइँ वाक्यहरू छोटो गर्नुहुन्छ र तपाइँ तपाइँको लेखलाई अनुकूलन गर्नुहुन्छ। एउटै विधि क्यारेक्टरहरूको संख्यामा लागू हुन्छ। वाक्यमा अक्षरहरूको संख्या र निश्चित दरमा शब्द अनुपात समावेश गरेर तपाईंले थप अनुकूलित परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो पूर्ण रूपमा तपाइँ कसरी काम गर्नुहुन्छ मा निर्भर गर्दछ।
त्यस्तै, यदि तपाईंलाई प्रतिबन्धित क्षेत्रमा केहि लेख्न भनियो भने, यो उपकरण काममा आउनेछ। मानौं तपाईलाई 200 शब्दहरूमा एउटा लेख लेख्न भनिएको छ जुन तपाईको कम्पनीले महसुस गरेको परियोजनाहरू वर्णन गर्दछ। शब्दहरू गणना नगरी तपाईंको व्याख्या गर्न सम्भव छैन। लेख लेख्ने प्रक्रियाको क्रममा, तपाईंले छोटो लेखको परिचय, विकास र निष्कर्ष खण्डहरू सङ्कलन नगरुन्जेल तपाईंले कति शब्दहरू छोड्नुभएको छ भनेर जान्न चाहनुहुन्छ। यस चरणमा, शब्द काउन्टर, जसले तपाइँको लागि गणना प्रक्रिया प्रदर्शन गर्दछ, तपाइँको सहयोगमा आउनेछ।
कीवर्ड घनत्व गणना
काउन्टरले प्रविष्ट गरिएको पाठमा सबै शब्दहरू विश्लेषण गर्दछ। कुन शब्दहरू बढी प्रयोग गरिन्छ? यसले तुरुन्तै गणना गर्दछ र पाठ प्यानलको छेउमा रहेको सूचीमा यसको परिणाम छाप्छ। सूचीमा, तपाइँ लेखमा 10 सबैभन्दा सामान्य शब्दहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जब अन्य साइटहरूमा उपकरणहरूमा शब्दको दायाँ वा बायाँमा साइन क्यारेक्टरहरू हुन्छन्, तिनीहरूले यसलाई फरक शब्दको रूपमा सोच्छन्। उदाहरणका लागि, वाक्यको अन्त्यमा थपिएको अवधि, वाक्यमा अल्पविराम वा अर्धविरामले शब्दलाई फरक पार्दैन। त्यसैले यो उपकरणमा, तिनीहरू सबै एउटै शब्द मानिन्छ। यसैले, अधिक सटीक कीवर्ड विश्लेषण गरिन्छ।
साथै, पाठमा दोहोरिने शब्दहरू पत्ता लगाउने र यसको सट्टा समानार्थी शब्दहरू प्रयोग गर्नाले तपाईंको लेखनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछ। तपाईको लेखलाई अझ बुझ्ने र पढ्न योग्य बनाउन यो राम्रो तरिका हो। यस उद्देश्यको लागि, कुञ्जी शब्दको घनत्व निरन्तर जाँच गरेर, तपाईंले पाठमा कुन दोहोरिने शब्दहरू व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ भनेर बुझ्नुहुनेछ।
अद्वितीय शब्द गणनाले तपाइँको लेखन शब्दहरूको सन्दर्भमा कति धनी छ भनेर प्रमाणित गर्दछ। उदाहरणका लागि, एउटै विषयमा जानकारीका ३०० शब्दहरू भएका दुई फरक पाठहरूलाई विचार गरौं। यद्यपि दुबैमा समान शब्द गणना छ, यदि एकसँग अर्को भन्दा धेरै अद्वितीय शब्द गणना छ भने, त्यो लेखको अर्थ लेख धनी छ र थप जानकारी दिन्छ। यसरी, शब्द काउन्टर उपकरणको साथ लेखहरूको धेरै सुविधाहरू अन्वेषण गर्दा, तपाईंसँग लेखहरू बीच तुलना गर्ने अवसर पनि हुनेछ।
शब्द काउन्टर सुविधाहरू
शब्द काउन्टर एक धेरै आवश्यक उपकरण हो, विशेष गरी कीवर्ड घनत्व गणनाको लागि। धेरै भाषाहरूमा; पाठमा भएका शब्दहरू जस्तै: सर्वनाम, संयोग, पूर्वसर्ग र यस्तै पाठको अनुकूलनको लागि कुनै महत्त्व हुँदैन। तपाईंले यी महत्वहीन शब्दहरूलाई घनत्व सूचीको दायाँतिर X-चिह्नित बटनहरूसँग हटाउन सक्नुहुन्छ, र त्यो सूचीमा थप महत्त्वपूर्ण शब्दहरू देखा पर्न सक्नुहुन्छ। व्यावहारिक प्रयोगको लागि, तपाइँ स्क्रिनको शीर्षमा पाठ इनपुट प्यानल ठीक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ।
शब्द काउन्टरले HTML ट्यागहरूलाई बेवास्ता गर्छ। लेखमा यी ट्यागहरूको उपस्थितिले अक्षर वा शब्दहरूको संख्या परिवर्तन गर्दैन। जसरी यी मानहरू परिवर्तन हुँदैनन्, वाक्य र अनुच्छेद मानहरू पनि परिवर्तन हुँदैनन्।
काउन्टर शब्द कसरी प्रयोग गर्ने?
अनलाइन शब्द काउन्टर - क्यारेक्टर काउन्टर, जुन नि:शुल्क Softmedal.com सेवा हो, धेरै सरल र सादा इन्टरफेस डिजाइन छ। यो प्रयोग गर्न धेरै सरल छ, तपाईले गर्नुपर्ने भनेको पाठ क्षेत्र भर्नु हो। तपाईंले किबोर्डमा थिच्नुहुने प्रत्येक कुञ्जी रेकर्ड गरिएको हुनाले, वर्ण र शब्दहरूको संख्या पनि लाइभ अपडेट हुन्छ। सफ्टमेडल वर्ड काउन्टरको साथ, तपाइँ पृष्ठलाई रिफ्रेस नगरी वा कुनै बटन क्लिक नगरी तुरुन्तै अक्षर र शब्दहरूको संख्या गणना गर्न सक्नुहुन्छ।
अक्षर संख्या कति छ?
वर्णहरूको संख्या भनेको खाली ठाउँहरू सहित पाठमा भएका वर्णहरूको संख्या हो। यो नम्बर धेरै महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्धहरू पोस्ट गर्नको लागि। उदाहरणका लागि, धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई ट्विटर क्यारेक्टर काउन्टर जस्ता उपकरणहरू चाहिन्छ, ट्विटर क्यारेक्टरहरूको अधिकतम संख्या गणना गर्दै, जुन 2022 मा 280 हुनेछ। त्यस्तै गरी, SEO अध्ययनहरूमा, शीर्षक ट्याग लम्बाइको लागि अनलाइन क्यारेक्टर काउन्टर आवश्यक छ, जुन 50 र 60 क्यारेक्टरहरू बीच हुनुपर्छ, र वर्णन ट्याग लम्बाइ, जुन 50 र 160 क्यारेक्टरहरू बीच हुनुपर्छ।